अमेजन जंगलका १० रोचक तथ्यहरु - Khabar Break | Khabar Break
सुन तोलाको ७७ हजार ६ सय पुग्यो
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकिया अघि नबढाउन लेखा समितिकाे निर्देशन
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाका सम्बन्धमा ३ माग राख्दै कांग्रेसले गर्‍यो सदन अवरुद्ध
कमिसन मागेको अडियोबारे बास्कोटासँग बुझेपछि आवश्यक निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी
अमेजन जंगलका १० रोचक तथ्यहरु
अमेजनको जंगलमा विगत केही सातायता व्यापक डढेलो लागिरहेको छ । अमेजनको जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल नभएको भन्दै विश्वभरबाट आक्रोशसँगै निराशा व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अमेजनको जंगल के हो ? किन यसको महत्व छ ? यी विषय निकै चासो हुनसक्छ । अमेजन जंगलका १० रोचक तथ्यहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ-
ल्याटिन अमेरिकामा रहेको अमेजनको विशाल जंगल संसारकै सबैभन्दा ठूलो जंगल हो । यो जंगल ल्याटिन अमेरिकाका ९ वटा मुलुकसम्म फैलिएको छ ।
७० लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जंगलको ६० प्रतिशत भाग ब्राजिलमा पर्छ । यसअनुसार यो क्षेत्रफल भनेको नेपालजस्ता झण्डै ४८ वटा मुलुकको भूभाग बराबर हो । यसको बाँकी भाग कोलम्बिया, पेरु, भेनेजुएला, बोलिभिया, फ्रेन्च गुएना, इक्वेडोर, गुएना, सुरिनाममा पर्छ ।
विश्वको कुल वर्षावन अर्थात् रेनफरेस्ट को आधा हिस्सा अमेजनको जंगलले मात्र धानेको छ । यसअनुसार विश्वमा जतिपनि वर्षावन छन्, त्यसको आधा हिस्सा अमेजनको जंगलले ओगटेको छ ।
२) साहारा मरुभूमिको खनिज
अमेजनको जंगलले अफ्रिकाको विशाल साहारा मरुभूमिबाट विशाल खनिज पदार्थ सोस्ने गरेको छ । कारण भने अचम्मको छ । पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ ।
यसअनुसार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बहने हावाका कारण ब्राजिलभन्दा ठिक पूर्वमा रहेको संसारकै सबैभन्दा ठूलो साहारा मरुभूमिबाट आउने उड्ने बलौटे माटो र खनिज पदार्थ सीधै अमेजनको जंगलमा पुग्ने गरेको छ । यसबाट अमेजनको जंगललाई आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध हुने गरेको छ ।
एक तथ्यांक अनुसार साहारा मरुभूमिको ५६ प्रतिशत धुलो अमेजन जंगलले सोस्ने गरेको छ । जंगलले धुलोबाट बिरुवालाई आवश्यक पर्ने फस्फोरस उपलब्ध हुन्छ । नासाको अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष १ सय ८२ टन धुलो २ हजार ६ सय किलोमिटर दूरी पार गरी अमेजनले साहाराबाट ग्रहण गर्ने गरेको छ ।
३) अमेजन नदी
अमेजन नदी विश्वको सबैभन्दा विशाल नदी हो । पानीको वहावको हिसाबमा विश्वको सबैभन्दा विशाल नदी अमेजन नदीको श्रोत यही जंगल हो ।
अमेजन नदीको बहाब करिब २ लाख ९ हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । यस नदीमा ३ हजारभन्दा बढी माछाका प्रजाति रहने विश्वास गरिन्छ ।
अमेजनको जंगलले विश्वका जिवाष्मलाई आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने विश्वास गरिन्छ । सोही कारण यसलाई विश्वको फोक्सोको संज्ञा समेत दिइन्छ ।
अमेजनले अक्सिजन उत्सर्जन मात्र नभई वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई सोस्ने समेत गरेको छ । समग्रमा हेर्दा अमेजनको जंगलले विश्वको लागि एक एअर मेसिनको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।
अमेजनको जंगलमा ५० भन्दा धेरै आदिवासीहरुको बसोबास रहेको छ । यी आदिवासीहरु अमेजनको जंगलमा नै निर्भर रहने गरेका छन् ।
फरक फरक भाषा सँस्कृति एवं रहनसहन रहेका यी आदिवासीहरुमध्ये अधिकांश कुनै गाउँमा स्थायी रुपमा भन्दा पनि घुमन्ते शैलीमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । यी मध्ये केही आदिवासीहरु अझै पनि मानव सभ्यतासँग परिचित नरहेको विश्वास गरिन्छ ।
६) जैविक विविधता
अमेजन जंगलमा व्यापक स्तरको जैविक विविधता पाइन्छ । एक अध्ययन अनुसार अमेजनको जंगलमा विश्वका १० प्रतिशत वन्यजन्तु पाइने तथा २० प्रतिशत चराचुरुङ्गी पाइन्छ ।
त्यस्तै यहाँ वनस्पतीको सङ्ख्या पनि विश्वको अन्य स्थानमा भन्दा धेरै पाइन्छ । अमेजनको जंगल विश्वको सबैभन्दा ठूलो पारिस्थितिक प्रणाली हो ।
अमेजनको जंगलको अधिकांश क्षेत्र पूर्ण रुपमा अन्धकारमय छ । अत्यन्त बाक्लो जंगल रहेकाले यहाँ सूर्यको प्रकाश जमिनसम्म पुग्न पाउँदैन ।
सोही कारण यहाँका अधिकांश हिस्सा अन्धकार हुन्छ । घना जंगल भएको क्षेत्रमा सूर्यको १ प्रतिशत प्रकाश मात्र अमेजनको जंगलको जमिनमा पर्ने जनाइन्छ ।
८) वन फडानी
अमेजनको जंगलमा वनफडानी व्यपक मात्रामा हुने गरेको छ । सन् २००४ मा यहाँ निकै ठूलो स्तरमा वन फडानी भएपछि सन् २००५ देखि २०१० सम्म निकै न्यून स्तरमा मात्र वर्षा भएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा त्यस क्षेत्रमा रहेको खनिज पदार्थको उत्खननका लागि वन फडानी हुने गरेको हो ।
वन फडानीका कारण यहाँका वन्यजन्तुको अस्तित्व तथा आदिवासीको जीवनयापनमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । विगत केही वर्षयता वन फडानीका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा २० प्रतिशत कमी आएको बताइन्छ ।
९) मौसम परिवर्तन
तीन डिग्री तापक्रम बृद्धि हुँदा यहाँको ७५ प्रतिशत जंगल नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अबको १ सय वर्षभित्र अमेजनको जंगल पूर्ण रुपमा नष्ट हुनेछ । वर्तमानमा पनि मौसम परिवर्तनको असर देखिरहे पनि आगामी दशकमा यसको प्रत्यक्ष असर देखा पर्दै जाने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
अमेजनको जंगल त्यतिधेरै मलिलो छैन । सोही कारण यहाँ कृषिकर्म गर्न असम्भवप्रायः छ । कृषिकर्म असम्भव रहेकाले यहाँका आदिवासीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नियमित रुपमा बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
जानीराखौँ चिया बनाउने सहि तरिका,कहिले पिउने चिया ?,एक दिनमा कति पिउने चिया ?